Tixraaca Factory, Shirkado cusub | Shiinaha Tixraaca-saareyaasha
Xarunta Macluumaadka Qaboojinta
Bannaanka Qaboojinta Golaha Wasiirada
Qaboojinta Telecom Site
Industrial is Qaboojinta
Energy Kaydinta Qaboojinta
AC shaqeeya golaha wasiirrada dibadda qaboojinta ee qaran (US)
codsi: qaran waa mid ka mid ah wadayaasha mobile waaweyn ee United States. AC qaboojiye ku shaqeeya Envicool ayaa waxaa laga codsadaa in ay xal qaboojinta qalabka at BTS dibadda armaajooyinka batari qaran tan iyo 2012-qaran. WARARKA OO KOOBAN: UL waafaqsan & shahaado IP55 tamarta High PR-oolnimada ...
XRow qaboojinta xal at mid ka mid ah xarunta xogta bixiyaha ugu weyn ee internet adeeg ee (China)
codsi: user waa mid ka mid ah bixiyeyaasha adeegga internet ugu weyn ee Shiinaha, kuwaas oo caan ku tahay adeegyada ay internet kala duwan. Waxay leedahay xarumaha xogta laba ka mid ah Shiinaha taageerada ay gaadiidka xogta weyn. Envicool noqday bixiyaha ugu weyn ee xal qaboojinta tan iyo 2013 xarunta xogta ay in ay ...
CYBERMATE CRAC AT Shiinaha UNICOM MACLUUMAADKA XARUNTA (Shiinaha)
codsi: Yizhuang IDC, mid ka mid ah xarunta 5-star IDC xogta ay leedahay Shiinaha Unicom, waa xarun keentay xogta ku qafaasha maraakiibta ee Beijing Shiinaha. xarunta Xogtan waxaa loo sameeyaa gaadiidka badan oo xogta muhiimka ah ee Shiinaha Unicom. Envicool bixiyo 62 cutub oo nidaamka CRAC 100kW CyberMate xarunta xogta this ee 2013 ...
DC shaqeeya golaha wasiirrada dibadda qaboojinta at Ooredoo (Ciraaq)
codsi: Ooredoo waa mid ka mid ah wadayaasha mobile multi-qaran oo waaweyn. DC qaboojiye ku shaqeeya Envicool ayaa waxaa laga codsadaa sidii xal qalabka qaboojinta ee golaha wasiirada BTS dibadda Ooredoo ayaa tan iyo 2013 ee dalal kala duwan. WARARKA OO KOOBAN DC xaaladda hawada kombaresarada ku shaqeeya oo aan inverter High en ...